Hiiraan: Qarax lala eegtay kolonyo ciidamo Ethiopian ah • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Hirshabelle / Hiiraan: Qarax lala eegtay kolonyo ciidamo Ethiopian ah
Hiiraan: Qarax lala eegtay kolonyo ciidamo Ethiopian ah
October 29, 2018 - By: Abdirisak Faamoos
Kolonyo gaadiid dagaal ah oo ay la socdeen ciidamo ka tirsan AMISOM gaar ah kuwo Ethiopian ah ayaa qarax lagula eegtay deegaanka Ceelgaal ee gobolka Hiiraan.
Qaraxan ayaa la sheegay In uu ahaa miinada nooca dhulka lagu aaso ,waxaana dadka deegaanka ay sheegeen in uu haleelay gaadiid dagaal oo ay saarnaayeen ciidamada Ethiopia ee qeybta ka ah howlgalka AMISOM.
Dadka deegaanka waxa ay kaloo kuw warameen in uu jiro khasaaro nafeed oo soo gaaray ciidankan lala eegtay miinada balse ilaa iyo hada lama helin tirada ciidan ee ku dhintay qaraxa.
Ciidamada qaraxa lala eegtay ayaa markii hore ka amba baxay magaalada Buulo burde sida dad goobjoogyaala ah sheegeen waxaana ay kusii jeedeen deegaan u dhow xadka uu dalka Ethiopia la wadaago gobolka Hiiraan ee Soomaaliya.
Ceelgaal oo ah deegaanka qaraxa miino lagula eegtay kolonyadan ka tirsan ciidanka AMISOM gaar ahaan kuwa Ethiopia ayaa dhowr jeer oo hore waxaa ka dhacay qaraxyo sidan oo kale ah maadaama deegaankan ay si aad ah u isticmaalaan ciidamad a howlgalka nabad ilaalinta u jooga Soomaaliya ee AMISOM .